Wednesday, 23 April 2014 Forum ပင်မစာမျက်နှာ
လွန်ခဲ့သောနှစ် ၁၀၀ ပအိုဝ်းလူမျိုးအကြောင်း
အလံဟူသည် အလံဟူသည် အကြောင်းမဲ့ပေါ်ပေါက်ခဲ့ကြသည်မဟုတ်ပေ။
အခြေအမြစ်မရှိသော အကြောင်းရင်းခံ တစ်ခုခုကိုသော်လည်းကောင်း၊ အကျိုးပြုသော ဦးတည်ချက် တစ်ခုခုသော်လည်းကောင်း အခြေခံကြသည်သာဖြစ်သည်။
ရင့်ကျက်နက်နဲသော အဓိပ္ပါယ်ကိုဆာင်သည့် အမှတ်အသားတစ်ခုခုပင်ဖြစ်သည်။ တစ်နည်းအားဖြင့် အလံသည် ရည်ရွယ်ချက်တစ်ခုခု (သို့မဟုတ်) အကြာင်းကိစ္စတစ်ခုခု အတွက် အမှတ်အသား (သို့မဟုတ်) အထိမ်းအမှတ်အဖြစ် အသုံးပြုသော ရောင်စုံခြယ် ပိတ်စမျိုးဖြစ်သည်။ အလံဟူသော စကားလုံးမှာလေထဲ၌ လှုပ်ရှားနေသည့်အရာ ဟူ၍ လည်းကောင်း၊ မြန်မာအဘိဓာန်ကျမ်းတွင် အလံသည် အရောင်ပုံစံအမျိုးမျိုးရှိ၍ တိုင်တုတ်တံများတွင် ကာလွင့်ထူသော အ၀တ်(သို့မဟုတ်) စက္ကူုဖြင့် ပြုလုပ်ထားသည့်အရာ ဟူ၍လည်းကောင်း အဓိပ္ပါယ်ဖွင့်ဆိုထားသည်။ အမျိုးသားအလံ (သို့မဟုတ်) နိုင်ငံတော်အလံမှာ နိုင်ငံတစ်နိုင်ငံလူမျိုးတစ်မျိုးအတွက် အမှတ်အသားကြီးတစ်ခု ဖြစ်သည်။ ယခုခေတ် နိုင်ငံတိုင်း၌ရှိသော အမျိုးသားအလံ (သို့မဟုတ်) နိုင်ငံတော်အသီးသီးသည် မိမိတို့လူမျိုး၏ ဇာတိသွေး ဇာတိမာန် ပြင်းထန်တက်ကြွစေရန် အလို့ငှာ မိမိတို့ တိုင်းပြည်နှင့် သက်ဆိုင်ဆီလျော်စွာ သတ်မှတ်ပြဋ္ဌာန်းထားသည့် အလံ များ ဖြစ်ကြသည်။
နိုင်ငံတော်အလံသည် သက်ဆိုင်ရာနိုင်ငံ၊ နိုင်ငံသူနိုင်ငံသား၊ နိုင်ငံအစိုးရနှင့် ထိုအစိုးရ၏ ရည်းမှန်းချက်များကို ကိုယ်စားပြုသည်။ နိုင်ငံသူနိုင်ငံသားအများအပြားက မိမိတို့နှင့်သက်ဆိုင်ရာ နိုင်ငံတော်အလံ၏ ဂုဏ်သရေမညိုးရလေအောင် ကာကွယ်စောင့်ရှောက်ရင်း အသက်စွန့်ခဲ့ကြပြီး ဖြစ်သည်။ မိမိတို့နိုင်ငံတော်၏ အလံကိုဂုဏ်ပြုရန် လေးစားကြရန်မှာ နိုင်ငံသားတိုင်း၏ အရေးကြီးသော တာဝန်တစ်ရပ်ဖြစ်သည်။ အမျိုးသားအလံ၊ နိုင်ငံတော်အလံသာမကစစ်တပ်၏အမှတ်အသားတက္ကသိုလ်ကျောင်းများ၏ အမှတ်အသား၊ ဘရင်များ၏အမှတ်အသား၊ အယူဝါဒများ၏အမှတ်အသား၊ အသင်းအဖွဲ့များဆိုင်ရာအမှတ်အသား၊ အချက်ပြရန် အမှတ်အသားဆိုင်ရာအလံများစားရှိသည်။ အလံကိုတစ်ဦးချင်း၊ တစ်ယောက်ချင်း၊ အများစုပေါင်း၍ ဦးတည်ချက်၊ ရည်မှန်းချက်၊ အောမြင်မှုကိုအခြေခံ၍ အသွင်သဏ္ဍန်ပုံစံအမျိုးမျိုးအဖော်ဆောင်လေ့ရှိကြသည်။ ထို့ကြောင့်အလံများတွင် ပါရှိသော အမှတ်အသားများသည် သက်ဆိုင်ရာ အဖွဲ့အစည်း၏ လေးနက်သော သရုပ်ဖော်ချက်ပင်ဖြစ်သည်။ နိုင်ငံသားတိုင်း မိမိနိုင်ငံ၊ မိမိလူမျိုး၏ အလံတော်ကိုတွေ့မြင်ရတိုင်း အားမာန်တက်ကြွ၍ နိုင်ငံချစ်စိတ်၊ ဇာတိမာန်စိတ်ဓာတ် များ နိုးကြားတက်ကြွလာကြသည်။
လူ့ယဉ်ကျေးမှုများ စတင်ပေါ်ပေါက်လာစဉ်မှစ၍ ကမ္ဘာအရပ်ရပ်မှာ အလံသဘောဆောင်သော အမှတ်အသားအဖြစ် လွှင့်ထူပြီး သူတို့၏ရည်ရွယ်ချက်နှင့်သင့်လျော်သည့် ကျေးငှက် တိရိစ္ဆာန်တို့၏ရုပ်တု စသောအရာဝတ္ထုများကို အသုံးပြုခဲ့ကြသည်။ နောင်တွင် အလံကို ပုံပန်းသဏ္ဍန် အရွယ်အစားအမျိုးမျိုး၊ အခေါ်အဝေါ် အသုံးအနှုန်း အဆင့်ဆင့် ပြောင်းလျက် သုံးစွဲလာခဲ့ကြသည်။ တံခွန်၊ ကုက္ကား၊ မုလေးပွား၊ ကြက်လျှာ စသည်တို့ကို အလံများ၏ရှေ့ပြေးဟု ဆိုရပေမည်။ တံခွန်၊ ကုက္ကား၊ မုလေးပွား၊ ကြက်လျှာများသည် ဂေါတမမြတ်စွာဘုရားလက်ထက်ကပင် စတင်အသုံးပြု ခဲ့ကြသည်။ တံခွန်၊ ကြက်လျှာတို့ကို အခြေပြုမြစ်ဖျားခံ၍ တစ်စတစ်စဖြင့် မျက်မှောက်ခေတ် အလံများကို ကျယ်ပြန့်စွာ သုံးစွဲလာခဲ့ကြသည်။
ခရစ်မပေါ်မီ နှစ်(၉၀၀)ခန့်က အဆီးရီးယားနိုင်ငံတံခွန်များ၊ စစ်အလံများသုံးစွဲခဲ့ကြပုံကို ထိုခေတ်က ထုလုပ်သော ကျောက်ရုပ်များ အိုးခွက်များပေါ်၌ တွေ့မြင်ခဲ့ရသည်။ အလံကို အ၀တ်စဖြင့် ချုပ်လုပ်အသုံးပြုခြင်းကို ရောမတို့ စတင်တီထွင်ခဲ့ကြသည်။ ဥရောပတိုက်နိုင်ငံများ၌ အလံလွင့်ထူသည့်အလေ့အထကို ဆာရာဆင်လူမျိုးများမှ စတင်ပြန့်နံ့သွားခဲ့သည်ဟုဆိုသည်။ ခရစ်တေယ်မပေါ်မီ နှစ်(၃၀၀) ခန့်က ရောမဧကရာဇ်များသုံးသော အလံတော်သည် ယခုခေတ် အလံတော်များနှင့် နီးစပ်တူညီသည်ဟု ဆိုနိုင်သည်။ အရှေ့တိုင်းတွင် အလံကို ရှေ့အကျဆုံးအသုံးပြုသောနိုင်ငံမှာ တရုတ်နိုင်ငံနှင့် အိန္ဒိယနိုင်ငံတို့ပင်ဖြစ်သည်။ အိန္ဒိယနှင့် တရုတ်နိုင်ငံတို့မှ တံခွန်များ၊ အလံများကိုင်ဆောင်သုံးစွဲသည့် အလေ့အထသည် မြန်မာ၊ ထိုင်းနှင့် အရှေ့တောင်အရှနိုင်ငံများသို့ ပြန့်နံ့ရောက်ရှိသွားသည်။
မြန်မာနိုင်ငံသမိုင်းဦးခေတ်တွင် အလံနှင့်စပ်လျဉ်း၍ အထောက်အထားများ မတွေ့ရှိခဲ့သော်လည်း သမိုင်းအလယ်လောက်ခေတ် သက္ကရာဇ်၈၄၂မှ၈၄၃ခုနှစ်အထိ စိုးစံခဲ့သော ဒုတိယမင်းခေါင် လက်ထက်တော် အခါ၌ စတင်တွေ့ရှိရသည်။ ကုန်းဘောင်ခေတ် မြန်မာမင်းများလက်ထက်တွင် ဘုရင်မင်းမြတ်ကို ကိုယ်စားပြုသော (သို့မဟုတ်) နိုင်ငံတော်ကို ကိုယ်စားပြုသောအလံတော်အဖြစ် ဒေါင်းအလံကို သတ်မှတ်ထားရှိကြောင်း တွေ့ရှိရသည်။ မင်းတုန်းမင်းတရားကြီးလက်ထက်တွင် ဒေါင်းအလံကို မြန်မာနိုင်ငံတော်အလံအဖြစ် အသုံးပြုခဲ့ကြောင်း တွေ့ရှိရသည်။ ကုန်းဘောင်မင်းဆက်နောက်ဆုံးတိုင်အောင် ဒေါင်းအလံကို မြန်မာနိုင်ငံအမျိုး သားအလံအဖြစ် လည်းကောင်း ၊မြန်မာနိုင်ငံတော်အလံအဖြစ်လည်းကောင်း သတ်မှတ်ခဲ့ကြောင်း ပေါ်လွင်သည်။
၁၉၃၈ ပြည့်နှစ်၊ ဆရာစံလယ်သမားအရေးတော်ပုံအလံတွင် ကြက်လျှာစွန်းအလံ၊ အဖြူရောင်တွင်နဂါးကို ဂဠုန်သုတ်ဟန် ရေးဆွဲ၍ အသုံးပြုခဲ့သည်။ `
၁၉၃၈ခုနှစ်၊ မတ်လတွင် ပြည်မြို့၌ ကျင်းပြုလုပ်သော တို့ဗမာအစည်းအရုံး တတိယညီလာခံအစည်းအဝေးတွင် သုံးရောင်ခြယ် အလံ၏ အလယ်၌ ဒေါင်းရုပ်အလံ အလုပ်သမားနှင့် တောင်သူလယ်သမားလူတန်းစားကို အခြေခံသော တံစဉ်အမှတ်အသား ကို ပြောင်းလဲအသုံးပြုခဲ့ကြောင်း သိရသည်။ ၁၉၃၆ခုနှစ် ဖေဖော်ဝါရီလတွင် ကျင်းပသော မြန်မာနိုင်ငံကိုလိုနီဥပဒေပြုလွတ်တော်တွင် အင်္ဂလိပ်ဘုရင်မင်းမြတ်၏ ဘဘောတူညီချက် အရ မြန်မာနိုင်ငံအတွက် မြန်မာဘုရင်ခံက သတ်မှတ်ပေးခဲ့သည်။ အလံ၏အရောင်မှာ အပြာရောင်ဖြစ်ပြီး၊ အပြာရောင်၏ အဖျား၌ စက်ဝိုင်းအတွင်းဆေရောင်ခြယ်ထားသော ဒေါင်းရုပ်ကို ထည့်ပေးထားသည်။ တိုင်းရင်း ဘက် အထက်ထောင့်တွင် ဗြိတိသျှယူနီယံဂျက်အလံအမှတ်အသားပါရှိသော အလံကိုသတ်မှတ်ပေးခဲ့သည်။
ဂျပန်ခေတ် ဘိုအိုင်အေအလံ၌ အလယ်စက်ဝိုင်းအဖြူတွင်းက ဒေါင်းသဏ္ဍန်ပါ အ၀ါ၊ အစိမ်း၊ အနီသုံးရောင်းခြယ်အလံကို အမျိုးသားအလံအဖြစ် အသုံးပြုခဲ့ကြသည်။ ၁၉၄၂ ခုနှစ် ဘီအေဒီအလံကိုလည်းအဆိုပါအလံကိုပင် အနည်းငယ်ပြောင်းလဲ၍ ဆက်လက်အသုံးပြုခဲ့သည်။ ၁၉၄၂ ခုနှစ် မတ်လ (၂၇) ရက် ဂျပန်တော်လှန်ရေးတွင် အလံတော်ကို အနီရောင်အောက်ခံထား၍ တိုင်းရင်းဘက်တွင်ကြယ်ဖြူတစ်ပွင့်ပါရှိသော အလံတော်ကိုအသုံးပြုခဲ့သည်။ ဂျပန်တော်လှန်ရေးအပြီး အသစ်ပြန်လည်ဖွဲ့စည်းထားသော (ဖဆပလ) အဖွဲ့၏ အလံတော်ကို လည်း တော်လှန်ရေးတွင်အောင်ပွဲရခဲ့သော အလံတော်ကိုပင် ဆက်လက်အသုံးပြုခဲ့ကြသည်။ ၁၉၄၇ ခုနှစ် ပြည်ထောင်စုမြန်မာနိုင်ငံတော် တိုင်းပြုပြည်ပြုလွတ်တော်မှ ရွေးကောက်တင်မြှောက်ပြီး တိုင်းပြုပြည်ပြု လွတ်တော်မှ ပြည်ထောင်စု မြန်မာနိုင်ငံတော်အလံ၊ အထိမ်းအမှတ် သီချင်းနှင့် မြို့တော်ကို ၁၉၄၇ ခုနှစ် စက်တင်ဘာလ ( ၂၄ ) ရက်နေ့တွင် ပြည်ထောင်စုမြန်မာနိုင်ငံတော် ဖွဲ့စည်းအုပ်ချုပ်ပုံအခြေခံဥပဒေ၌ ထည့်သွင်းရေးဆွဲအတည်ပြုပေးခဲ့သည်။
ပအိုဝ်းအမျိုးသားများ ပထမဦးဆုံး အသုံးပြုခဲ့သောအလံမှာ ၁၉၂၈ ခုနှစ် ဖြားတန်ကောင်ခယ် ဦးဆောင်သော ပဒေသရာဇ်စနစ် ဆန့်ကျင်တော်လှန်ရေးအလံဖြစ်သည်။ ၄င်းအလံသည် အလျား ( ၉ ) ပေ၊ အနံ (၅) ပေရှိသော အစိမ်းရောင်ဖြစ်သည်။ အစိမ်းရောင်၏ အလယ်ဗဟိုတည့်တည့်တွင် အဖြူရောင်စက်ဝိုင်းပါရှိသည်။ အဖြူရောင် စက်ဝိုင်းအတွင်းတွင် တိုင်းရင်းဘက်သို့ မျက်နှာမူထားသော ထိုင်နေသည့် ခြင်္သေ့ပုံပါရှိသည်။ အစိမ်းရောင်၏ အစိပ္ပါယ်မှာ နုပျိုလန်းဆန်းခြင်း၊ ပေါ့ပါးသွက်လက် ရွင်လန်းခြင်းနှင့် အေးချမ်းသာယာခြင်းကို ဖော်ဆောင်သည်။ အဖြူရောင်သည် ဖြူစင်သန့်ရှင်းခြင်း၊ ကျစ်လစ်သိမ်မွေ့နုညံ့ခြင်း နှင့် အေးချမ်းသာယာ တည်ငြိမ်သော သဘောကို ဆောင်ပါသည်။ ခြင်္သေ့သည် ခွန်အားကြီးမား၍ လျင်မြန်သွက်လက်ပေါ့ပါးစွာ လှုပ်ရှားနိုင်သောအစွမ်းရှိသည်။
ဒုတိယကမ္ဘာစစ်အပြီး အာရှနိုင်ငံများ ကိုလိုနီလက်အောက်မှ လွတ်မြောက်ရန် အမျိုးသားလှုပ်ရှားမှုများ စတင်ကြိုးပမ်းလာခဲ့ကြသည်။ မြန်မာနိုင်ငံသည်လည်း ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်း ဦးဆောင်၍ လွတ်လပ်ရေးရရှိရန် အပူတပြင်း ကြိုးပမ်းလာခဲ့ကြသည်။ ၁၉၄၆ ခုနှစ် ပထမပင်လုံညီလာခံနှင့် ၁၉၄၇ ခုနှစ်တွင် ဒုတိယပင်လုံညီလာခံ ကျင်းပနိုင်ခဲ့ပြီး မြန်မာ့လွတ်လပ်ရေးကို အတူတကွရယူရန် တောင်တန်းဒေသ တိုင်းရင်းသားများနှင့် သဘောတူညီမှု ရရှိခဲ့သည်။ ရှမ်းပြည် ပြည်သူ့လွတ်လပ်ရေးအဖွဲ့နှင့်အတူ ပအိုဝ်းလူငယ်များ ပါဝင်လှုပ်ရှားခဲ့ကြသည်။ ၁၉၄၆ ခုနှစ်တွင် တောင်ကြီးဒေသ၊ ဟိုပုံးဒေသ၊ လွိုင်လင်ဒေသနှင့် ဆီဆိုင်ဒသအတွင်း ပအိုဝ်းအမျိုးသားများကို စတင်စည်းရုံးခဲ့ကြသည်။ ၁၉၄၇ ခုနှစ်တွင် ပအိုဝ်းအမျိုးသားကိုယ်စားပြု ပအိုဝ်းလွောင်ဗူ(ခေါ်) ပအိုဝ်းစုစည်းအဖွဲ့ကို ဖွဲ့စည်းနိုင်ခဲ့သည်။ ပအိုဝ်းလွောင်ဗူဥက္ကဌအဖြစ် ဦးဖိုးခင် အားလည်းကောင်း၊ အတွင်းအရးမှူးအဖြစ် ဦးခမ်းခိုင် အား လည်းကောင်း ရွေးချယ်တင်မြောက်ခဲ့သည်။
ပအိုဝ်းအမျိုးသားကိုယ်စားပြု ပအိုဝ်းလွောင်ဗူ ( ခေါ် ) ပအိုဝ်းစုစည်းအဖွဲ့၏ အလံမှာအလျား ( ၉ ) ပေအနံ ( ၅ ) ပေရှိ အစိမ်းရောင်ဖြစ်ပြီး အစိမ်းရောင်အလယ်ဗဟို တည့်တည့်တွင် အဖြူရောင်စက်ဝိုင်းပါရှိသည်။ အဖြူရောင်စက်ဝိုင်း၏ အလယ်တွင် ယခင်အသုံးပြုခဲ့သော ခြင်္သေ့အစား ဒေါင်းပုံကိုအသုံးပြုခဲ့သည်။
၁၉၅၀ ပြည့်နှစ်တွင်ပအိုဝ်းလွောင်ဗုမူခေါ်(ခေါ်) ပအိုဝ်းစုစည်းအဖွဲ့အစား ပအိုးအမျိုးသားအဖွဲ့ချုပ် အတိုကောက်အားဖြင့် (ပအမဖ)ကို အမည်ပြောင်းလဲ၍ အသစ်ထပ်မံ ဖွဲ့စည်းခဲ့သည်။ ပြည်ထောင်စုပအိုဝ်းအမျိုးသားအဖွဲ့ချုပ် (ပအမဖ)၏ ဥက္ကဌအဖြစ် ဗိုလ်ဟိန်မောင် အားလည်းကောင်း၊ အတွင်းရေးမှူးအဖြစ် ဦးဖေရှင် အားလည်းကောင်း ရွေးချယ်တင်မြောက် တာဝန်ပေးအပ်ခဲ့သည်။ ၁၉၅၀ပြည့်နှစ်မှစ၍ ပြည်ထောင်စုအမျိုးသားအဖွဲ့ချုပ် (ပအမဖ) အမှုဆောင်များနှင့် ပအိုဝ်း အမျိုးသား ခေါင်းဆောင်ကြီးများမှ အသင်းအဖွဲ့တစ်ခုတွင် မရှိမဖြစ်အထူးလိုအပ်လှသော ပြည်ထောင်စု ပအိုဝ်းအမျိုးသားအဖွဲ့ချုပ် (ပအမဖ)ဖွဲ့စည်းပုံ အခြေခံစည်းမျဉ်းဥပဒေကို ပြုစုရေးဆွဲခဲ့ကြသည်။ အဆိုပါ ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံစည်းမျဉ်းဥပဒေတွင် နိဒါန်း၊ အခန်းရှစ်ခန်းနှင့် နိဂုံးဟူ၍ ပါရှိခဲ့သည်။ အခန်း( ၁ )အပိုဒ် ( ၃ ) တွင် အလံတော်၏ အချိုးမှာအလျား ( ၉ ) ပေ၊ အနံ ( ၅ ) ပေ အချိုးဖြစ်၍ အလံတော်၏ ထက်ဝက်( ၂ ၊ ၆ လက်မ) အောက်ခံသည် အစိမ်းရင့်ရောင်ဖြစ်သည်။ တိုင်းရင်းဘက် အပြာရင့်ရောင်၏ အလျား( ၄ ပေ၊ ၆ လက်မ)၊ အနံ ( ၂ ပေ၊ ၆ လက်မ)၊ အဖျားဘက်အနီရောင်၏ အလျား ( ၄ ပေ၊ ၆ လက်မ) ၊ အနံ( ၂ ပေ၊ ၆ လက်မ)ရှိရမည်။ အပြာရင့်ရောင်၏ အထက်ထောင့်စွန်းတွင် အချင်းတစ်ဆယ့်ရှစ်လက်မ ကြယ်ဖြူကြီးတစ်လုံး ပါရှိရမည်။ ဤအလံတော်မှာ ယာယီသတ်မှတ်ချက်ဖြစ်သည်ဟူ၍ ဖော်ပြပါရှိခဲ့သည်။
ပအိုဝ်းအမျိုးသားအလံတော်ပါ ကြယ်နှင့် အရောင်များ၏အနက်အဓိပ္ပါယ် ဖော်ညွန်းချက်းများမှာ ကြယ်၏အဓိပ္ပါယ်မှာ ကြယ်တို့မည်သည် လမ်းခရီးတွင်ရပ်တုံ့ခြင်းမရှိ သွားမြဲခရီးကိုမစွန့် အခရီးစဉ်အတိုင်း ရှေ့သို့သာဆက်၍ ခရီးနှင်လေ့ရှိခြင်း၊ ကမ္ဘာကြီးဖြစ်တည်ခဲ့သည့် အချိန်မှစ၍ လွတ်လွတ်လပ်လပ် ကိုယ်ပိုင်သီးသန့် အလင်းရောင်ရှိခြင်း စသည့်အရည်အသွေးများ ရှိသည့်အပြင် ပအိုဝ်းမျိုးနွယ်စုအားလုံးကို ကိုယ်စားပြု၍ တလုံးတည်းသော ကြယ်ကို သတ်မှတ်ရခြင်း ဖြစ်သည်။ အစိမ်းရင့်ရောင်သည် နုပျိုလန်းဆန်းခြင်း၊ ပေါ့ပါးသွက်လက်ခြင်း၊ ရွှင်ရွှင်လန်းလန်းရှိခြင်း အဓိပ္ပါယ်ကိုဆောင်သည်။ အနီရောင်သည် ရဲရင့်ခြင်း၊ ပြတ်သားခြင်း၊ သွတ်လက်ဖျက်လတ်ခြင်း အဓိပ္ပါယ်ဆောင်သည်။ အပြာရင့်ရောင်သည် အိနြေ္ဒရှိခြင်း၊ သိက္ခာရှိခြင်း၊ ယုံကြည်စိတ်ချရခြင်း အဓိပ္ပါယ်ဆောင်သည်။ အလံ၏အရွယ်များမှာ ကြီးငယ်မဟူ ထိုအမျိုးအစား အတိုင်း ကိုက်ညီနိုင်သမျှ ကိုက်ညီရမည်ဖြစ်သည်။ အထက်ပါ ပအိုဝ်းအမျိုးသားအလံတော်ကို ၁၉၅၅ ခုနှစ်၊ ဇန်န၀ါရီလ( ၅ ) ရက်နေ့ နှင့် ( ၆ ) ရက်နေ့တွင် ကျင်းပပြုလုပ်ခဲ့သော ပြည်ထောင်စုပအိုဝ်းအမျိုးသားအဖွဲ့ချုပ် ( ပအမဖ ) ညီလာခံမှ အတည်ပြုကြောင်း ဆုံးဖြတ်ခဲ့သည်။
အလံပါကြယ်နှင့် အရောင်များ၏ ဖွင့်ဆိုချက်များ (က) ကြယ်၏အဓိပ္ပါယ်ဖွင့်ဆိုချက်
နိုင်ငံတိုင်း၊ လူမျိုးတိုင်း၏ အများစုသည် ကြယ်သင်္ကေတကို အများဆုံး အသုံးပြုလေ့ရှိကြောင်း တွေ့ရှိရပါသည်။ မြန်မာအဘိဓာန်ကျမ်းစာအုပ်တွင် ကြယ်ကို အဓိပ္ပါယ် ဖွင့်ဆိုထားသည်မှာ ညအခါ၌ ကောင်းကင်တွင် အလင်းရောင် အပွင့်ကလေးများသဖွယ် မြင်ရသော ကောင်းကင်ဗိမာန်နက္ခတ်တာရာဟု ဖော်ပြထားသည်။ ကြယ်တို့သည် အေးမြသောအလင်းရောင်ကို ပေးသည်ဟု လူသားတို့ထင်မှတ်ကြသည်။ အမှန်မှာ ကြယ်များသည်လည်း နေကဲ့သို့ အလင်းရောအပူပါ လွှတ်ပေးလျှက်ရှိသည်။ နေတွင်ရှိသော ဓါတ်သဘာဝ အားလုံးကြယ်တွင်ရှိသည်။ အချို့သော ကြယ်များသည် နေထက်အဆပေါင်းများစွာ ကြီးသကဲ့သို့ နေထက်အဆပေါင်းများစွာ ပိုမိုတောက်ပကြသည်။ အားကောင်းသော မှန်ပြောင်းများဖြင့်ကြည့်လျှင် ကြယ်ပေါင်းသိန်းတစ်ထောင်ခန့် မြင်နိုင်သည်။ ကိုယ်ပိုင်အလင်းရောင်ရှိသော ကြယ်ပေါင်းများစွာ ရှိသကဲ့သို့ ကိုယ်ပိုင်အလင်းရောင်မရှိသော ကြယ်များစွာလဲရှိသည်။
အလံများတွင် ကြယ်ဖြင့်အမှတ်အသားပြု၍ ဖေါ်ပြရခြင်းမှာ ကြယ်တို့မည်သည်လမ်းခရီးတွင် ရပ်တံ့ခြင်းမရှိ သွားမြဲခရီးကို အစွန့်ပစ်ခရီးစဉ်အတိုင်း နောက်တွန့်သည်မရှိဘဲ ရှေ့သို့သာဆက်သွား၍ ခရီးနှင်လေ့ရြှိ့ခင်း၊ ကမ္ဘာဖြစ်တည်ခဲ့သည့်အချိန်မှစ၍ လွတ်လွတ်လပ်လပ် ကိုယ်ပိုင်သီးသန့် အလင်းရောင်ဖြင့် တည်ရှိခဲ့ခြင်းစသော ဂုဏ်အရည်အသွေးများ ရှိခြင်းကြောင့်ပင်ဖြစ်သည်။
( ခ ) အဖြူရောင်အဓိပ္ပါယ်ဖွင့်ဆိုချက်
အဖြူရောင်သည် လမင်း၏အရောင်ဖြစ်၍ အေးချမ်းမှုကို ဖြစ်စေသည်။ ဖြူစင်သန့်ရှင်းခြင်း၊ ကျစ်လစ်သိပ်သည်းခြင်း၊ သိမ်မွေ့နုညံ့ခြင်း စသည့်အေးချမ်းသာယာတည်ငြိမ်သော သဘောကိုဆောင်သည်။ စည်းကမ်းရှိသော၊ စည်းစနစ်ရှိသော အစွမ်းသတ္တိရှိသည်။ ကျန်းမာရေးကို အထောက်အကူပြုသော သဘောကိုဆောင်သည်။ ဆေးရုံများတွင် လူနာကုတင်၊ အိပ်ယာခင်း၊ ခေါင်းအုံးစွပ်၊ ခန်းစည်းနှင့် ဆရာဝန်ဝတ်စုံများသည် အဖြူရောင်ကိုသာအသုံးပြုကြသည်။ အပြူရောင်ကို မကျန်းမာသူလူမမာ တွေ့လိုက်ရရုံဖြင့် စိတ်ချမ်းသာပြီး ရောဂါသက်သာစေ၍ သောက၊ ဒုက္ခများပြေပျောက်စေသည်။ ခေါင်းအုံးစွပ်ဖြူဖြူဖြင့် အိပ်စက်လျှင် အိမ်မက်လိုလိုမက်တတ်သည်။ အရောင်တောက်ပသော ခေါင်းအုံးစွပ်များနှင့် အိပ်စက်လျှင် အိမ်မက်ဆိုးများမက်တတ်သည်။
( ဂ ) အနီရောင်အဓိပ္ပါယ်ဖွင့်ဆိုချက် အနီရောင်၏အဓိပ္ပါယ်သည် ရဲရင့်ခြင်း၊ သွက်လက်ဖျက်လတ်ခြင်း၊ ခြေမြန်လက်မြန်ရှိခြင်း၊ ပြိုင်ဘက်အပေါ် အနိုင်ရလိုမှု စိတ်ဓါတ်ပြင်းထန်ခြင်း၊ သူရဲကောင်းဆန်ခြင်း၊ စိတ်ဓါတ်ကိုတက်ကြွအောင်လှုံ့ဆော်ပေးခြင်း၊ စိတ်ဓါတ်ပျော့ညံ့သူကို စိတ်ဓါတ်တက်ကြွစေခြင်း စသောသဘောများကို ဆောင်သည်။ အားကစားသမားများ အနီရောင်ဝတ်စုံ ၀တ်ကစားလျှင် စွမ်းအင်များ အလိုလိုပြည့်ဝတိုးတက်ပြီး အနိုင်ရလိုစိတ် ပြင်းထန်တတ်သည်။ အနီရောင်ကြိုက်နှစ်သက်သော လူများသည် ရဲစွမ်းသတ္တိရှိသူ၊ နိုးကြားတက်ကြွ လှုပ်ရှားလိုသူ၊ အတိုက်အခိုက်ဝါသနာပါသူ၊ ဆွဲဆောင် စည်းရုံးတက်သူများ ဖြစ်တတ်ကြသည်။
(ဃ) အပြာရောင်အဓိပ္ပါယ်ဖွင့်ဆိုချက် အပြာရောင်၏အဓိပ္ပါယ်သည် အိနြေ္ဒရှိခြင်း၊ သိက္ခာရှိခြင်း၊ ယုံကြည်စိတ်ချရခြင်းစသောအရည်အချင်းများရှိသည်။ ပတ်ဝန်းကျင်နှင့် လိုက်လျောညီထွေမှုကို ဖြစ်စေပြီး စိတ်ပြေပျောက်မှု အသွင်ကို ဖန်တီးပေးနိုင်သည်။ အသက်ရှင်သန်မှုကို အားပေးနိုင်စွမ်းရှိသည်။ အောင်မြင်မှုရလိုလျှင် အပြာရောင်ကိုအသုံးပြုလေ့ရှိကြသည်။ တစ်နည်းအားဖြင့် အပြာရောင်သည် ခံစားထိခိုင်လွယ်သော၊ အေးချမ်းစွာနေလိုသော၊ ပျော်ရွှင်မှုကိုမက်မောတတ်သော၊ ခံစားမှုများကို ထိန်းချုပ်နိုင်သော သဘောလည်းရှိသည်။ ထို့ကြောင့် အပြာရောင်ကြိုက်နှစ်သက်သူများသည် နူးညံ့ပျော့ပြောင်းသော နှလုံးသားရှိသူ၊ သူတစ်ပါး၏ မေတ္တာကိုခံယူလိုသူ၊ မေတ္တာထားတတ်သူဖြစ်သကဲ့သို့ မိခင်စိတ်ရှိသူ၊ အပြစ်ကင်းကင်းနေလိုသူများလည်း ဖြစ်တတ်ကြသည်။
( င ) အစိမ်းရောင်အဓိပ္ပါယ်ဖွင့်ဆိုချက် အစိမ်းရောင်၏အဓိပ္ပါယ်သည် နုပျိုလန်းဆန်းခြင်း၊ ပေါ့ပါးသွက်လက်ခြင်း၊ ရွှင်ရွှင်လန်းးလန်းဖြစ်စေခြင်း၊ အိုမင်းရင့်ရောင်ခြင်းကို တိုက်ဖျက်ခြင်းသဘော ရှိသည့်အပြင် သစ္စာရှိခြင်း၊ ကတိတည်သော၊ ဂရုဏာတရားကြီးမားသော၊ သူတစ်ပါးကို ကူညီတတ်သော၊ ချိုသာရည်မွန်သော သဘောများကို ဆောင်ပါသည်၊ အစိမ်းရောင်သည် ကြည်လင်အေးချမ်းသော သဘောရှိသဖြင့် လယ်ကွင်းပြင်စိမ်းကို ကြည့်ရှုရခြင်းသည် ခြောက်သွေ့နေသောကန္တာရကို ကြည့်ရှုရခြင်းထက် စိတ်ချမ်းသာမှု၊ အေးချမ်း သာယာပျော်ရွှင်မှုကိုပို၍ဖြစ်စေသည်။ နိုင်ငံတကာဆေးရုံများ၏ လူနာခြုံစောင်များ၏အရောင်မှာ အစိမ်းရောင်ကို အသုံးပြုလေးရှိကြသည်။ လေအေးပေးစက် တပ်ဆင်ထားသောအခန်းကို အနီရောင်ဆေးသုပ်ပေးခြင်းထက် အစိမ်းရောင်သုပ်ပေးခြင်းက အအေးဓါတ်ပိုစေနိုင်ပါသည်။ အစိမ်းရောင်ကြိုက်နှစ်သက်တတ်သူများသည် အပူအပင်မရှိ စိတ်ကူးယဉ်တတ်သူ ဖြစ်လေ့ရှိကြသည်။
ကျမ်းကိုး ၁။ ကြည်မာတက္ကသိုလ်၊ မြန်မာနိုင်ငံတော် အလံ ၁၉၇၀- ပြည့်နှစ်၊
၂။ မြန်မာ့စွယ်စုံကျမ်း၊ အတွဲ ( ၁၄ ) မြန်မာနိုင်ငံ ဘာသာပြန် စာပေအသင်း ၁၉၇၅ - ခုနှစ်။
၃။ ပြည်ထောင်စု ပအိုဝ်းအမျိုးသားအဖွဲ့ချုပ် ( ပအမဖ ) ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံစည်းမျဉ်းဥပဒေ ၁၉၅၀ - ပြည့်နှစ်။
We have2guests online Copyright © 2012 Kaung Nanne. All Rights Reserved. Powered by eTrade Myanmar Co., Ltd.